Ciidan ilaaliya canshuuraha oo tababar loo soo xirey – Radio Muqdisho
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciidamo gaar ah oo loogu tala galay inay ilaaliyaan canshuuraha berriga ee ay dowladdu qaado, iyadoo Ciidamadani maanta loo soo xiray tababar ay ku baranayeen sida loo ilaaliyo canshuuraha berriga iyo guud ahaan waxa ay yihiin canshuurahaas.
Munaasabad lagu soo xirayay tababarka ayaa ka dhacday Muqdisho gaar ahaan Dugsiga Tababarka Gen Kaahiye . Waxaana kasoo qayb galay wasiiru dowlaha Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ,Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed, Saraakiisha Ciidanka Boliiska iyo marti sharaf kale.
Inta munaasabadda aysan bilaaban ka hor ayaa ciidamada waxa ay soo bandhigeen gaada ka cayaar qurux badan oo ka turjumeysay sida ay ugu diyaarsanyihiin howsha laga sugayo, waxaana taliyaha Ciidanka Boliiska iyo Wasiiru dowlaha salaam sharaf ay ka qaateen ciidamada.
Taliyaha hogaanka ilaalinta canshuuraha ee Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed Janaraal Cabdulaahi Xasan Bariise oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyey ciidamada tababarka loo soo xiray in looga baahan yahay in dadka ula dhaqmaan si wanaagsan oo ay asluub ku dheehan tahay isla markaana waxaa uu shacabka dhankooda ka codsaday in ay bixiyaan caanshuurta ku waajibtay.
Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed sareeyo guute Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo munaasabadda hadal ka jeediyay ayaa sheegay in ciidamadani looga baahanyahay in xil ay iska saaraan waajibaadka shaqo ee laga doonayo oo ah cashuur uruurinta iyo ilaalinta daqliga Dowladda.
Wasiiru dowladaha Maaliyadda Mudane C/laahi Maxamed Nuur oo gebagebadii munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in ciidankan ay qeyb weyn ka qaadan doonaan sidii si habsami leh ugu socon lahaayeen howlaha canshuur qaadista ah.
Shacabka reer Muqdisho ayaa soo dhaweynaya dardargalinta canshuurta oo saldhigan u noqoneyso dhismaha iyo horumarinta dalka, waxaana ay qabaan haddii si wanaagsan loo maamulo dakhliga ka soo xaroodo in horumarkaasi uu dareemi doono qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah.